Miara-miasa amin'i Amadeus ny Air Senegal
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Miara-miasa amin'i Amadeus ny Air Senegal
Rehefa manohy ny serivisy ao amin'ny faritra ny Air Senegal, dia manome lanja ny automatisation, ary ny fampahalalana amin'ny tena izy ny mpitatitra
Rehefa manohy ny serivisy any amin'ny faritra Afrika Andrefana ny Air Senegal, dia manome lanja ny automatisation, ary ny fampahalalana tena izy ny zava-misy
Fantany fa ny fanavaozana no lakilen'ny fahombiazana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, ny mpiady saina Senegaly Air Senegal dia niara-niasa tamin'i Amadeus
Air Senegal dia manohy ny serivisy miverina amin'ny fanjanahana
Fantany fa ny fanavaozana no lakilen'ny fahombiazana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, ny mpiady saina Senegaly Air Senegal dia niara-niasa tamin'i Amadeus mba hampihatra ny Altéa Suite, ao anatin'izany ny System Passenger Service System (PSS).
As Air Senegal manohy ny serivisy ao amin'ny faritra, ny mpitatitra dia manome lanja ny automatisation, ary ny fampahalalana misy ny tena zava-misy marina. Ny Amadeus Altéa Passenger Service System (PSS) dia manolotra ireo singa ireo amin'ny alàlan'ny famandrihana feno, ny lisitra ary ny fahafaha-mibaiko ny fiaingana. Izy io koa dia manome alàlana ny zotram-piaramanidina hanohana ireo mpandeha mandritra ny diany, manome fampandrenesana amin'ny tena izy, manokana ho fampahafantarana ny fanovana sidina, serivisy na tolotra manokana. Manampy ireo zotram-piaramanidina hamolavola serivisy ho an'ny mpandeha ny rafitra ary manolotra fomba fizahana haingana sy tsotra kokoa.
Raha sendra misy fikorontanana, ny Altéa PSS dia hamela ny Air Senegal handray indray ny mpandeha ao anatin'ny minitra vitsy. Raha misy fiovana fiaramanidina minitra farany, ny zotram-piaramanidina dia afaka mamerina ny mpandeha avy hatrany ary manitsy ny lanjany sy ny lanjany. Miaraka amin'ny fikirakirana sy ny fanamboarana ny fiaramanidina mandeha ho azy farany, hisoroka ny fidiran'ny tanana amin'ny lafo be, mandany fotoana ary be zotram-pianarana ny zotram-piaramanidina.
Ny Air Senegal dia tao anatin'ny fanitarana haingana manerantany rehefa namely ny areti-mandringana. Na eo aza ny areti-mifindra dia mbola mikasa ny hanampy toeran-tsoa eropeana roa ny mpitatitra ho an'ny portfolio-ny mitombo, ary koa ny sidina mankany amin'ny toerana maro samihafa atsy Afrika. Vao haingana ihany koa izy no namidy tamin'ny sambo maoderina misy Airbus A220-300 valo namboarina tao amin'ny Dubai Air Show tamin'ny taona 2019.
Mamadou Ba, Tale mpanatanteraky ny Performance Executive and Support ho an'ny Air Senegal, dia nilaza hoe: "Amin'ny maha-iray amin'ireo zotram-piaramanidina haingam-pandeha indrindra eto Afrika, ao amin'ny Air Senegal, dia mikendry ny ho tonga mpitarika ny fitaterana an'habakabaka Afrika Andrefana isika amin'ny fiankinana amin'ny foibem-paritra misy anay. Miezaka izahay mba hanome fahafaham-po ny mpanjifa sy ny fahombiazan'ny asa ary mino izahay fa ny fiarahamiasa aminay Amadeus dia ahafahanay mivoaka matanjaka kokoa amin'ny krizy COVID-19. ”
Maher Koubaa, filoha lefitra mpanatanteraky ny seranam-piaramanidina ho an'ny Moyen Orient, Torkia ary Afrika ao Amadeus, nanampy hoe: “Faly izahay hiara-miasa amin'ny Air Senegal amin'ny làlam-pahasitranana. Mampahery ny mahita ny fiasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka toy izany raha ny amin'ny fampifanarahana sy ny drafitra ho an'ny ho avy. Izahay rehetra ao Amadeus dia manantena ny fiaraha-miasa amin'ny mpitatitra mba hampihatra ny herin'ny teknolojia rehefa miasa izahay hamadika ny fanamby ho fotoana mety. "
Fampahalalana tena ilaina momba ny fikarakarana farany
Dr. Thomas Maloney miditra amin'ny Skyre